dayniile » Sida lagu ogaado caanaha caruurta ee been abuurka ah
Waalidka Yiyi oo 11 sano jir ah waxay ka walaacsan yihiin waxyaabaha caruurta ee la been abuuray
“Waxaan aad uga cabsi qabaa waxyaabaha caruurta ee la been abuuray,” ayey tiri Zeng oo gabadheeda ay 11-jir tahay.
Walwalkeeda wuxuu muujinayaa fadeexadda ballaaran ee aadanaha dhankiisa ka timaada ee caalamka oo dhan hadda ka jirta, waxaana la arkay alaabo been abuur ah oo laga faa’iday malaayiin dollar, suuq fiicanna yeeshay.
Dawada la been abuuray waxay geysan kartaa dhibaato xun.
“Si buuxda uma aamini karo baqaarada, suuqyada waawayn ama xittaa internet-ka. Waan ogahay mararka qaar in dadka ay waxkasta u sameynayaan lacag darteed,” ayey tiri Zeng.
Zeng oo telkeeda u adeegsaneysa xaqiijinta caano ay soo iibsatay
‘Dheemanka dhiigga’ waxaa ka faa’ida kooxaha hubeysan